Nke a bụ ol oge ochie Can of Worms | Martech Zone
Nke a bụ ol nke ochie nke Worms
Monday, April 9, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Mgbe ị kụrụ okwu 30 nke a na ntanetị na otu ụbọchị, ị maara na ị tiri akwara!
Mgbe m kpebiri biputere afọ ojuju m na 37 Signals, ọ dịghị ụzọ m na-agbalị iti n'ihu peeji nke TechMeme ma ọ bụ nwee Jason Fried jiri aka gi gwa m. Ndị nke gị na gburugburu kemgbe nwa oge mara na abụ m ọmarịcha nwa okorobịa na-anaghị achọ iwe iwe na blọgụ m.
N'ezie, ọ bụrụ na ndị iwe ewee iwe, m na-anwa ịpụ n'ụzọ m iji gbalịa ịpụ dị ka ndị enyi. Anyị nwere ike ghara ikwenye ma bụrụ enyi. N'ezie, anaghị m ekwenye na ndị enyi m karịa ọtụtụ mmadụ! Naanị jụọ ha!
Nke ahụ kwuru, na blogosphere bụ oke ọhịa. Anyị anaghị, ma ọ bụ na anyị agaghị enwe Usoro akparamagwa. Anyị ekwesịghịkwa! Ekwenyesiri m ike na nnwere onwe ikwu okwu na ịntanetị.
Ekwenyere m na nkewa. Anyị bụ ndị ọka iwu nke anyị na Wild Wild West a ma anyị ekwesịghị iguzo ma hụ ka ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ na-eyi egwu, na-agha ụgha, ma ọ bụ ọbụna na-enye ndụmọdụ ọjọọ. IMHO, nke ka elu ikike gị, n'agbanyeghị Google or Teknụzụ, ị ga-enwekwu ọrụ iji hụ na ị na-ewepụta eziokwu dị ka eziokwu na echiche dị ka echiche.
Ana m ekwu eziokwu mgbe m kwuru na m chọrọ ka ị kpọga m n'ọrụ maka edemede m. Ana m asọpụrụ gị maka ịma aka m. Naanị mara na mgbe ntụ ruru, m ka nwere ike ghara ikwenye gị. Ọ dị mma mmadụ abụọ inwe echiche dịgasị iche banyere otu ọnọdụ. Anyị anaghị eketa otu nghọta, yabụ na anyị agaghị ahụ ihe dịka nke ọma.
Nkọcha nke Ọlaedo Ọla-edo
Apr 9, 2007 na 10: 33 PM
Jason gwara gị pụọ? Ebee ka nke ahụ dị? Tupu ị kpọọ post ya ma ọ bụ mgbe akpọrọ ya "ọnụọgụ nke amaghị ama?" Ì chere na ị nwere ike ịgagharị na-akpọ ndị "amaghị" ma sachaa aka gị na ya? Threw tufuru a onwe onye ọkpọ.
Apr 9, 2007 na 10: 44 PM
Mba Michael, anaghị m asa aka m na ya. Ọ bụ ya mere m biputere ọzọ banyere ya. Mana adighi m eweghachi iji okwu nzuzu. N'okpuru nkọwa ziri ezi nke okwu ahụ, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ọkwa ahụ dị. Ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-achọ inye gị ụfọdụ ihe àmà nke na-abụghị, M na-emeghe ka ọ. Ekwenyesiri m ike na ha agaghị abụ ihe akaebe ọ bụla. N'ihi ya, okwu ahụ bụ 'amaghị'.
Apr 9, 2007 na 10: 43 PM
Kedụ ka ị ga - esi kpọọ onye na - amaghị ihe ma zoo n’azụ dịka ‘ezigbo mmadụ’? Na mkpesa ọzọ na na ịgbachitere echiche nke ha na ha na-agwa gị?
Apr 9, 2007 na 10: 50 PM
Kedu onye m kpọrọ amaghị ihe? Kpọmkwem okwu bụ, "Di na nwunye ụbọchị ole na ole gara aga, blọọgụ ha webatara ọzọ nke amaghi ama:". O doro anya na anaghị m ezo n'azụ ihe ọ bụla, SH. Adịghị m onye na-aza aha na-edeghị aha na blog site na iji aha m. My blog na njirimara m bụ nnọọ na-emeghe.
Ọ bụrụ na post ahụ abụghị onye na-amaghị ihe, SvN nwere ohere ọ bụla iji kwado eziokwu ha na ụfọdụ eziokwu ndị ọzọ. Ndi mmọ ẹkenam? Mba ha nwere ike? Mba. N'ihi ya, amaghị ihe bụ okwu ziri ezi.
Apr 10, 2007 na 12: 20 PM
Douglas, mgbe ị kpọrọ edemede mmadụ amaghị na ị na-akpọ ha amaghị. Ntinye bu na onye dere akwukwo a amaghi, n’agbanyeghi ma ikwuru ya otutu okwu. Ndi mmadu na ede, edeghi ede. Ide ederede enweghi ike ide onwe ya.
Kedụ ka iji aha m aha m mee ka m bụrụ onye na - ekwenyeghị aha m? Nwere adreesị ozi-e m, ọ dị mma ma na-agụnye aha m. Mgbe mbụ m na-ede akwụkwọ maka ụlọ ọhụrụ, m na-eme ya n’amaghị ama?
Họrọ okwu gị ntakịrị karịa, Douglas. Nkwupụta okwu mkpuchi gị na-adị, ezigbo, amaghị ihe.
Apr 10, 2007 na 12: 53 PM
Daalụ, SH. O doro anya na anyị ekwenyeghị na iji okwu ahụ amaghị ihe. Nke ahụ dị mma, enwere m ekele na ị na-ewepụta oge. I would have much rather you been a long-time visitor and gotten tomara me… but I think i gaghi enwe ike ime onye obula oge nile.